1. Cylindrical chipo kuputira ndechimwe chinotonhorera dhizaini chinogona kuve chinoshanda pamhemberero kana mazuva akakosha, nekuti muchokwadi mhando zhinji dzekuputira dzakagadzirwa mune yakasarudzika chimiro senge mabhokisi ekuki, mabhokisi echokoreti, nezvimwe. Vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti iyo cylinder chipo yekuputira nzira yakaoma, asi kwete zvachose.
2. Midziyo yekugadzirira - Chipo chekumonera bepa - chigero - Transparent masking tepi - Mutete wakapetwa-mativi enamatira - Chipo ribhoni
3. Paradzira bepa rekumonera woisa chipo chesilinda. Enzanisa kukwirira kwemupendero wepamusoro wepepa kuti ukwane mukati mebhokisi.
4. Cheka bepa racho kune saizi yebhokisi rawakaisa pakutanga. Nokucheka mativi pamwe nekureba kwepepa
5. Paunenge uine chakareba chakakona chechipo kuputira, isa iyo cylindrical chipo bhokisi yakatwasuka pakati pepepa rekuputira. Rutivi rwumwe kumucheto kwepepa kugadzirira kuputira mupumburu.
6. Kutanga kuputira netepi yakajeka pakati penzvimbo yepepa uye nechipo bhokisi.
7. Wobva waputira rimwe divi repepa uchitenderedza kuti uvhare chipo chebhokisi chakatwasuka. Chengetedza iyo tepi zvakasimba kuitira kuti irege kubuda.
8. Vhura pepa rezasi pasi kutanga kuti uite kubatisisa pamusoro pebhokisi. Izvo zvisina kunetsa kutamba nazvo
9. Bata kona rekapepa rinobonderana nedivi rimwe, peta pasi pasi pamusoro pebhokisi uye ubatanidze tepi yakajeka.
10. Kutanga kutora makona nekudzvanya pepa roll mune imwechete nzira uye kumanikidza kusvikira iyo crease yakaenzana saizi. Paunenge wakapetwa katatu kana katatu, shandisa yakajeka yekunamatira tepi kudzivirira kusununguka. Ramba uchiita izvi kusvikira bhokisi rese.
11. Kana wapedza neiyo yepamusoro, flip iro bhokisi kuti uite iwo chaiwo chaiwo pasi. Vhara zvinyoro zvakanaka.
12. Cheka masendimita mashoma ekunamatira-mativi akasendamira zvichienderana nehukuru hweribhoni. Yakanamatira kumashure kweBo Wobva waunza Bo woisa pamusoro pebhokisi pakati kana chero chikamu chaunoda. Ndizvo.
13. Maitiro ekuputira humburumbira chipo hachina kuoma zvachose. Kunyangwe padyo nemwaka wemutambo, kana iwe uchida kupa chipo kuratidza rudo Kuchengeta avo vakakukomberedza Ipapo unofanirwa kuputira chipo chakadai Wobva waedza kuishandisa pamwechete